Kedu ihe bụ mmekọrịta ọhaneze na gịnị ka ọ mejupụtara? | Ozi ECommerce
N'ahịa, e nwere ọtụtụ ụdị ọrụ na ọrụ ga -abụrịrị eziokwu. Otu n'ime ha nwere ike bụrụ ihe dị oke mkpa, n'ihi na ọ bụ ya na -ejikọ ika ma ọ bụ ngwaahịa ha na -ere na ndị na -ege ntị. Yabụ, mmekọrịta ọha na eze nke ụlọ ọrụ gị nye ndị ahịa.
Mana gịnị bụ Mmekọrịta Ọha? Kedu ọrụ a na -arụ? Ha na -enye uru? Kedu atụmatụ ha na -agbaso? Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ọrụ a, ma ọ bụ maka ịchọrọ ịrara onwe gị nye ya ma ọ bụ n'ihi na ọ bụ ihe eCommerce gị na -efu, mgbe ahụ anyị na -enye gị igodo niile.
1 Gịnị bụ mmekọrịta ọha na eze?
2 Kedu ọrụ nwere
3 Usoro nke Mmekọrịta Ọha na -eme
4 Kedu ihe ị ga -amụ ka ọ bụrụ Mmekọrịta Ọha?
Gịnị bụ mmekọrịta ọha na eze?
Ọ bụrụ na anyị dabere n'echiche nke nyere Relationstù Mmekọrịta Ọha na America, nkọwa nke ndị a ga -abụ:
Usoro nkwurịta okwu dị mkpa nke na -ewulite mmekọrịta bara uru n'etiti otu na ndị na -ege ha ntị.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, anyị na -ekwu maka ndị ọkachamara n'ịrụ ọrụ nkwukọrịta dị mkpa nke na -eje ozi ijikọ ụlọ ọrụ na ọha ha, na ọkwa dị mma, n'ezie.
Iji mee nke a, ha na-eji mkpọsa ahịa akpọrọ, nke nwere ike ịdị iche iche ma tinye isiokwu ndị ọzọ dị ka ndị na-emetụta ihe, ụlọ ọrụ ndị ọzọ, mkpakọrịta, wdg.
A na -enye nkọwa sara mbara ma zie ezi nke ihe ga -abụ mmekọrịta ọha na eze Rex F. Harlow, onye edemede, onye nchịkọta akụkọ, onye mgbasa ozi na ọsụ ụzọ mmekọrịta ọha na eze:
“Mmekọrịta ọha na eze bụ ọrụ njikwa njirimara nke na -enyere aka ịtọlite ​​ma jigide usoro nkwukọrịta, nghọta, nnabata na imekọ ihe ọnụ n'etiti otu na ndị na -ege ya ntị; Ọ gụnyere ijikwa nsogbu ma ọ bụ okwu, ọ na -enyere ndị njikwa aka ka ha mara ihe ma na -echebara echiche ọha echiche; na -akọwa ma na -ekwusi ike ibu ọrụ ndị njikwa ijere mmasị ọha ozi; na -enyere ndị njikwa aka n'ihu mgbanwe ma jiri ha rụọ ọrụ nke ọma, na -aghọta ha dị ka usoro ịdọ aka na ntị iji tụọ anya usoro.
Kedu ọrụ nwere
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịbụ mmekọrịta ọhaneze, ị ga -ama kedu ihe ga -abụ ọrụ ndị ị ga -arụ. Kpọmkwem, anyị na-ekwu maka:
Mee mkpọsa nkwukọrịta, yana atụmatụ iji tinye ụlọ ọrụ ahụ na ọha ya. Ọ dị mkpa ka a na -enyocha ha mgbe niile iji hụ ma ha nwetara uru a tụrụ anya ya ma ọ bụ ọ dị mkpa ka a gbanwee ya.
Nọrọ na mgbasa ozi. Ịkwesịrị ilekọta ụlọ ọrụ mgbasa ozi ebe ọ bụ na ị ghọrọ onye nnọchi anya ụlọ ọrụ ahụ. Yabụ, ị ga -akwadebe akwụkwọ akụkọ, hazie ọgbakọ, jikwa ajụjụ ọnụ, wdg.
Nkwurịta okwu n'ime. Karịsịa ndị nwere ike metụtara ọrụ gị; dịka ọmụmaatụ, ndị na -emepụta ngwaahịa a, ma ọ bụ ndị na -eme akara nke ndị a.
Nkwurịta okwu mpụga. Ọ bụghị naanị na ndị nta akụkọ, kamakwa ndị na -eme ihe nkiri, ndị ama ama, ụlọ ọrụ ndị ọzọ, wdg. nke ha ga -ejikọ aka ọnụ.
Mmekọrịta ụlọ ọrụ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ị ga -ama maka atụmatụ mmebe iwu, iwu na ụkpụrụ ndị ọzọ nwere ike imetụta ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ ọha ị na -ezubere iche.
Nzukọ mmemme. Na ebumnuche nke imepụta onyonyo ika nwere ike ịkwalite ụlọ ọrụ ahụ.
Mee nyocha ahịa. Maka na ọ dị mkpa na oge niile ị maara ọnọdụ ụlọ ọrụ n'ahịa ebe ọ na -arụ ọrụ yana ndị asọmpi na ụdị onye ahịa ọ na -ezube.
Mepụta ọdịnaya nke mkpọsa nkwukọrịta ga -ebu.
Jikwaa ọnọdụ ọgba aghara na -anwa ibelata nsonaazụ ndị a na -ebute oke o kwere mee.
Usoro nke Mmekọrịta Ọha na -eme
Ịrụ ọrụ na Mmekọrịta Ọha abụghị ihe dị mfe, ọkachasị ebe ọ bụ na ị ga na -agbanwe mgbe niile ka ị na -eme mgbanwe ka ọha mmadụ si agbanwe. Agbanyeghị, enwere ọtụtụ ụdị enwere ike iji dị ka atụmatụ PR. Otu n'ime ndị bụ isi, na nke a na-akụzi mgbe niile bụ ihe a na-akpọ "IACE nlereanya" nke gụnyere akụkụ anọ nke mmekọrịta ọha na eze:
Nchọpụta. Ebe a na -eme ọmụmụ ahịa, asọmpi na ndị ahịa nwere ike nweta echiche nke otu esi eme usoro nke abụọ.
Omume. Ebe etinyere ọtụtụ usoro iji nwee ike kpọsaa ụlọ ọrụ ahụ wee mee mkpọsa mmekọrịta ọha na eze na -arụ ọrụ.
Nkwurịta okwu. A na -eji ya amata etu aga -ewebata mkpọsa ahụ yana etu esi atụ anya ka ọ meghachi omume na nzaghachi ụfọdụ (ọ bụrụ na ọ gara nke ọma, ọ bụrụ na -akatọ ya, ọ bụrụ na ọ naghị arụ ọrụ ...).
Nyocha. Iji tụọ nsonaazụ ma mara ma ọrụ mmekọrịta ọhaneze arụ ọrụla ma ọ bụ na ọ rụghị. Ọ bụghị naanị na ejiri ọnụ ọgụgụ webụsaịtị tụọ nke a, kamakwa site na netwọkụ mmekọrịta, ntanetị na mgbasa ozi n'ịntanetị, wdg. Mgbe ụfọdụ ọ naghị eme nke ọma na weebụ mana ọ na -aga nke ọma na netwọkụ ma ọ bụ ndị mmadụ na -ekwu maka isiokwu mana ọ naghị egosipụta n'ahịa.
Atụmatụ mmekọrịta ọha na eze ndị ọzọ enwere ike ịme bụ njikọ aka, ịkọ akụkọ ...
Kedu ihe ị ga -amụ ka ọ bụrụ Mmekọrịta Ọha?
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị n'ịrụ ọrụ na Mmekọrịta Ọha, ị kwesịrị ịmara na enwere ọtụtụ ụzọ ọzọ iji mechaa bụrụ ọkachamara mmekọrịta ọha. Ndị a:
Mụọ ọkwa FP dị elu. Ọ bụ nke na -enye gị ụdị ọzụzụ a na n'ime afọ abụọ ị nwere ike bido ịrụ ọrụ nzere n'okpuru ogwe aka gị nke na -enye gị ihe ọmụma dị mkpa.
Mụọ ọrụ na -enye gị ohere ịka nka na nkwukọrịta ụlọ ọrụ. Ọ bụ ya kacha nso na eme na Mmekọrịta Ọha.
Rụọ ọrụ na ya. Omume bụ ikekwe ụzọ ga -eme ka ị mụta ihe kachasị na ọrụ a. Ị nwere ike ịme ọzụzụ ma ọ bụ malite ịrụ ọrụ na Mmekọrịta Ọha, mana echefula ọzụzụ ahụ, n'ihi na ọ ga -enye gị ngwaọrụ dị mkpa iji mara ihe ị ga -eme oge niile.
Ọzọkwa, ịkwesịrị nwee nkà nkwukọrịta, ka ozi gị wee doo anya na nghọta mgbe niile, ka ọ ghara inye nghọtahie. Na mgbakwunye, ọ na -abawanye uru mara asụsụ, ọ bụghị naanị Bekee, mana opekata mpe otu.
Ugbu a ị matara mmekọrịta ọha na eze nke ọma, ọ bụ nke ahụ enweghị azụmahịa gị? Ị chọrọ ịrara onwe gị nye ya? Ka anyị mara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Kedu ihe bụ mmekọrịta ọhaneze na gịnị ka ọ mejupụtara?